Shirkii Madasha Qaran oo Maalintii Saddexaad galay – STAR FM SOMALIA
Shirkii Madasha Qaran oo Maalintii Saddexaad galay
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa ka socda Maalintii Saddexaad Shirka Madasha wada-tashiga Qaran ee u dhexeeya Madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Maamul Goboleedyada Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka.
Shirka ayaa qeybihiisii hore looga hadlay Amniga Qaranka iyo Doorashooyinka ka dhacaya Dalka iyo sidii ay uga dhicilahaayeen Caasimadaha Maamul Goboleedyada iyo Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Sidoo kale waxaa jira in wali muran uu ka taagan yahay in Dadka ku nool Gobolka Banaadir ay Matalaad ku yeeshaan Xubnaha Aqalka Sare,waxaana la sheegay in Hogaamiyaasha Soomaalida ay ku kala Aragti duwan yihiin.
Wararka ayaa sheegaya in qaar ka mid ah Madaxda Soomaalida ay soo jeediyeen in Muqdisho ay Matalaad ku yeelato Xubnaha Aqalka sare islamarkaana wax laga dhimo Maamulada qaatay Xubnaha Aqalka sare si dadka loo simo.
Warkaas markii qaar kamid ah ay sheegeen Hogaamiyaasha ka qeyb galaya Shirka Madasha ayaa waxaa soo baxay kala duwanaan ku aadan Arrintaas,taas oo keentay in Shirku uu Shalay soo xirmiwaayo.
Maanta ayaa la rajeynayaa in Shirka uu soo xirmo islamarkaana laga soo saaro War-murtiyeed lagu shaaciyo waxyaabihii Madasha qaran ay ku heshiiyeen.
(NISA) oo sheegtay in ay soo qabatay gaari ay saaran yihiin waxyaalaha qarxa iyo hub(Daawo Sawirada)
Dowladda oo Shirkadaha Korontada ugu baaqday in ay sameeyaan qiimo dhimis